Inyaniso ebuhlungu: iilekese zigulisa abantu abaninzi baseMelika.
Yinto entle kumzi mveliso wokutya, kodwa inyani ebuhlungu yeyokuba izinto ezinencasa zinokubangela ukuba abantu abaninzi baseMelika bagule.
Isiraphu yengqolowa ephezulu ye-fructose (HCFS) kunye neswekile (sucrose) zinxibelelene kakhulu nobhubhane wesizwe sethu wezifo ezinxulumene nokutya, njengokutyeba kakhulu; uhlobo lwe-2 yeswekile; izifo zentliziyo, zesibindi kunye nezintso; ezinye iintlobo zomhlaza, kunye nesifo i-Alzheimer. Okwangoku, iilekese zokufakelwa ezifana ne-aspartame (NutraSweet) kunye ne-sucralose (Splenda) zinomngcipheko kwimpilo. I-Aspartame (esetyenziswe kwiDiet Coke, kwiDiet Pepsi, kuGqirha uPepper kunye nezinye iimveliso ezithandwayo) inxulunyaniswa umhlaza kunye nezinye iingxaki ezinzulu zempilo, yaye inokwenza abantu batyebe ngakumbi kunokutya iswekile. Kukho izizathu zokukhathazeka malunga ne-sucralose nayo, kuba yenziwe nge-chlorine enetyhefu kwaye inokubola ibe yimixube enetyhefu, inokubangela umhlaza kwiimpuku, kwaye inciphise ibacteria yamathumbu.
Eyona nto ikhathazayo kuko konke oku ayisiyiyo nje ukubola komzimba kwezi zinto zinencasa kwisizwe sethu, kodwa yindlela ishishini lokutya kunye norhulumente wethu abasebenza kunye ukuze baqhubeke. Jonga ulwazi olungezantsi malunga nokuba yintoni efunyaniswayo kuphando lwe-US Right to Know.
IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (i-ILSI) ...
IiNkomfa zezeMpilo zikaRhulumente zeCoca-Cola eziFundisiweyo kwi-E ...
Disemba 2, 2020
I-Aspartame: Iminyaka elishumi yeSayensi ikhombe kwiNzulu ...
Amaxwebhu aphambili kwiiSweeteners
Amaxwebhu e-USRTK axobula umkhusane kwi-lobby lobby
Uphando lwase-US lweLungelo lokwazi luveze amaxwebhu amaninzi abonisa ukuba ishishini lokutya liphembelela njani emfihlekweni ukukhusela ukuthengisa iswekile. La maphepha alandelayo abhalwe ngokubhaliweyo ngu-USRTK Co-Director uGary Ruskin asekwe kula maxwebhu. Yabona iphepha lethu lemfundo ngolwazi oluthe kratya malunga nala maphepha.
Ubumbano kunye neMpilo: Ngaba izibonelelo ezixhaswa ngemali ngumzi-mveliso ezikhuthaza "izifundo ezikhokelwa ngurhulumente" okanye "isayensi esekwe kubungqina"? Isifundo semeko seZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi, NguSara Steele, uGary Ruskin, uLejla Sarcevic, uMartin McKee kunye noDavid Stuckler (6.2.19)
Ijenali yoMgaqo-nkqubo weMpilo kaRhulumente: "USoloko ufunda uPrinta oluNcinci ”: isifundo sophando senkxaso mali, ukubhengeza kunye nezivumelwano neCoca-Cola, NguSara Steele, uGary Ruskin, uMartin McKee kunye noDavid Stuckler (5.8.19)
Ngekota eMilbank: Ukudibana esidlangalaleni ngoBucala: Incoko phakathi kweCoca-Cola kunye neCDC, NguNason Maani Hessari, uGary Ruskin, uMartin McKee kunye noDavid Stuckler (1.29.19)
Ijenali ye-Epidemiology kunye neMpilo yoLuntu: Imibutho yezenzululwazi kunye 'nemfazwe' kaCoca-Cola kunye noluntu lwempilo yoluntu: ukuqonda okuvela kuxwebhu lweshishini lwangaphakathiNguPepita Barlow, uPaulo Serôdio, uGary Ruskin, uMartin McKee, uDavid Stuckler (3.14.2018)
Ijenali yoMgaqo-nkqubo weMpilo kaRhulumente: Ukuntsokotha kunye nokungqubana kweengxelo zomdla: ityala lokufundwa kwee-imeyile ezinaniselwano phakathi kweCoca-Cola kunye nabaphandi abaziintloko kuFundo lwaMazwe ngaMazwe lokuTyeba kobuntwana, indlela yokuphila kunye nokusingqongileyo (ISCOLE)NguDavid Stuckler, uMartin McKee kunye noGary Ruskin (11.27.17)
Iswekile / Iiswiti
Imbali yebarbaric yeswekile eMelika, nguKhalil Gibran Muhammad, ENew York Times, Agasti 14, 2019
Ukutya kwabantwana kuneswekile eninzi kwaye kuthengiswa ngokungachanekanga, U-WHO uthi, nguCorrine Gretler, Bloomberg, Julayi 15, 2019
Ngaba Iswekile Inetyhefu? UGary Taubes, ENew York Times, UEpreli 13, 2011.
Lo nguNombolo 1 woMqhubi weSwekile kunye nokuTyeba kakhulu. UAlexandra Sifferlin, ixesha, KuJanuwari 29, 2015.
Yishukela, Folks. UMark Bittman, ENew York Times, Februwari 27, 2013.
Ukuthintela ukuNcitshiswa kweziselo ezinxilisayo kwiZifundo ezibini. URoni uCaryn Rabin, ENew York Times, Septemba 21, 2012.
Amagosa ezeMpilo abongoza i-FDA ukuba inciphise i-Sweeteners kwiSodas. UStephanie Strom, ENew York Times, Februwari 13, 2013.
Isiraphu yengqolowa Inetyhefu engaphezulu kweTafile yeSwekile kwiimpuku zabasetyhini: Funda. Reuters, KuJanuwari 5, 2015.
Ukutya okuCinga: Yitya indlela yakho kwiDementia. UBijal Trivedi, Scientist New, Septemba 3, 2012.
Iiswidi zokuzenzela - ngokubanzi
I-Sucralose inokuba negalelo ekumelaneni ne-insulin kubathengi abanokutyeba kakhulu, Endocrine Namhlanje, ngoNovemba 6, 2016
Ukuphulukana nobunzima bomzimba, Amanzi abetha ukutya kwesoda. UNicolas Bakalar, ENew York Times, Oktobha 20, 2016.
Abasetyhini abaHla ngokutya iSoda yokuTya banokuthi banciphise ukuchuma, UHenry Bodkin, i TelegraphNge-Okthobha 17, 2016.
Iiswidi ezenziweyo zinokuphazamisa uLawulo lweSwekile yeGazi loMzimba. UKenneth Chang, ENew York Times, Septemba 17, 2014.
Ukhuseleko lweAspartame. ENew York Times, Februwari 21, 2006.
Iziphumo zeSweetener: Imibuzo emitsha iphakanyisiwe. UMarian Burros, ENew York Times, Julayi 3, 1985.
I-Sweetener ixhalabisa abanye oososayensi. UJane E. Brody, ENew York Times, Februwari 5, 1985.
Isoda / Iziselo ezinxilisayo
I-WHO ibongoza irhafu kwiziselo ezineswekile ukulwa ubutyebi, USabrina Tavernise, ENew York Times, Oktobha 11, 2016.
Iziselo ezinxilisayo ezinxulunyaniswe nokufa kwabantu abali-180,000 kwihlabathi liphela. Leslie Wade, CNN, Matshi 19, 2013.
Iziselo ezineswekile zibotshelelwe ekutyebeni kakhulu phakathi kwabafundi besikolo. UGenevra Pittman, Reuters, Agasti 5, 2013.
Ukutya isoda, umbulali othuleyo? UTom Philpott, UMama Jones, Matshi 1, 2012.
Iilekese eziLulwelo: Njani iZiselo eziThambileyo eziyonakalisa iMpilo yaseMelika. Iziko lezeNzululwazi kuMdla woLuntu, ngo-2005.
Ukuba iiNkampani zeSoda azifuni ukuPhathwa njengeeNkampani zoTuba, kufuneka ziyeke ukwenza njengazo, UPatrick Mustain, Scientific American, Oktobha 19, 2016.
Amanga amancinci amnandi amaShukela amakhulu. UGary Taubes kunye noCristin Kearns Couzens, UMama Jones, NgoNovemba / Disemba 2012.
Abenzi bokuTya okungafunekiyo ekujoliswe kubo abaNtsundu, iiLatinos kunye noLuntu lweMibala, ukonyusa iingozi ezivela kwi-COVID
Julayi 19, 2020
I-Aspartame ibotshelelwe ekuZuzeni ubunzima, ukuNqwenela ukutya kunye nokuTyeba kakhulu
Ngamana 31, 2020
Izityhilelo ezili-10 ezivela e-US Ilungelo lokwazi uPhando
IFIC: Ukutya Okukhulu Kujikeleza Njani Iindaba Ezimbi
Indawo yogcino zincwadi ezimnandi>